‘कूटनीतिक नोट’ सधैं गुपचुप, भारतबाट किन आउँदैन जवाफ? | Khash Khabar
गृह ‘कूटनीतिक नोट’ सधैं गुपचुप, भारतबाट किन आउँदैन जवाफ?
‘कूटनीतिक नोट’ सधैं गुपचुप, भारतबाट किन आउँदैन जवाफ?
२९ भाद्र २०७८, मंगलवार ०६:०१
काठमाडौं। विगतका घटनामा जस्तै सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटको यसपटक पनि भारतले बेवास्ता गरेको छ। दुई महिनाअघि दार्चुलामा तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएको जयसिंह धामी र नेपाली भूमिमा नेपाली प्रशासनको अनुमतिबिना हेलिकोप्टर उडाएको विषयमा भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको एक साता बित्यो । भारतले सो विषयमा कुनै जवाफ पठाएको छैन।
दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाका स्थानीय जयसिंह धामी तुइनबाट खसेर नदीमा बेपत्ता भएपछि सरकारले अनुसन्धान गर्ने भन्दै डेढ महिनासम्म बितायो। यसबीचमा सरकारले घटनाको विषयमा कुनै जवाफ माग्ने कोसिस गरेन। बरु सरकारले अनुसन्धान भइरहेकाले केही समय कुर्न सर्वसाधारणसँग अनुरोध ग¥यो। भारतको विषयमा गृह मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नजनाउनसमेत विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
दार्चुला घटनाको विषयमा सर्वसाधारणबाट सरकारको तीव्र आलोचना भएपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो। छानविन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा ३८ दिनपछि भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। यसबीचमा दार्चुला घटनासँगै नेपाली भूमिमा अनुमतिबिना हेलिकोप्टर उडाएको विषयमा सरकार मौन थियो । दुवैै विषयलाई समेटेर परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको एक साताभन्दा बढी समय बित्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भारतबाट कूटनीतिक नोटको अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको जानकारी दिए। दार्चुला घटना र नेपाली भूमिमा हेलिकोप्टर उडाएको विषयमा सरकारले भारतस्थित नेपाली दूतावासमार्फत जानकारी गराउन सक्थ्यो । तर, लामो समयसम्म सो विषयलाई सरकार अनुसन्धानको नाममामा मौन बसेको थियो।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत कूटनीतिक नोटको विषयमा अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा नआए पनि परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले पुष्टि गरेको छ। ‘भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोटबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले न्युज कारखानासँग भनिन्।
भारतले छिमेकी देश नेपालको कूटनीतिक नोट उपेक्षा गरेको अहिले मात्र होइन । यसअघि नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतीय राजीतिक नक्सामा समेटिएपछि नेपालले २० कात्तिक ०७६ मा सोबारे कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । सोबारेमा भारतले कुनै जवाफ दिएको छैन। बरु लिम्पियाधुरा र लिपुलेक आफ्नो भन्दै दाबी गर्दै आएको छ।
कूटनीतिक नोटको जवाफ पठाउनुको साटो नेपाली भूमिमा पसेर २६ वैशाख ०७७ मा भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन ग¥यो। जसको नेपालमा जनस्तरबाटै भारतको तीव्र विरोध भयो। यसबीचमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमा भारततर्फ इंगित गर्दै नेपाली भूमि फिर्ता ल्याइने घोषणा गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणाबाट चिढिएको भारतले नेपालसँग करिब ६ महिना कुनै संवाद गर्न चाहेन। प्रधानमन्त्री ओलीले नै भारतको स्वतन्त्रता दिवसको दिन पारेर भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई शुभकामना दिएपछि संवाद सुरु भएको थियो।
नेपालले २ जेठ ०७७ मा नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने घोषणा भयो। ५ जेठमा मन्त्रिपरिषद्बाट नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय भयो । सो निर्णय ३१ साउन ०७७ मा संसद्बाट सर्वसम्मतले पारित भएसँगै संविधान संशोधन भयो। संसद्बाट भएको उक्त संशोधन ४ असार ०७७ मा राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिन्।
नयाँ राजनीतिक नक्साबाट भारत थप चिढियो। भारतका मिडियाले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध र नेपालविरुद्ध अनर्गल प्रचार गरे। यसबीचमा तत्कालीन ओली सरकारले भारतलाई वार्ता र संवादबाट अगाडि बढ्न भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो। तर भारतले कुनै जवाफ पठाएन।
नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि भारतसँग सो विषयमा वार्ताका लागि तीनपटक कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। तर कुनै पनि नोटको जवाफ भारतले पठाएन। बरु नेपालसँगको सम्बन्धमा चिसोपन आयो। कूटनीतिक छलफल गर्न तयार नभएको भारतसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवादको प्रक्रिया अगाडि बढाए। भारतसँगको संवादपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली भारत भ्रमणमा वार्ताको वातावरण मिलाउन गएका थिए ।
कूटनीतिक नोटको उपेक्षा अहिले मात्रै होइन, भारतले ६ वर्षअघिदेखि गर्दै आएको छ। ०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुँदा भारतले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउन चीन र भारत सहमत भएको समाचार आएपछि दुवै मुलुकसँग सरकारले प्रतिक्रिया मागेको थियो। चीनले कूटनीतिक नोटको जवाफ पठाए पनि भारतले भने कुनै जवाफ पठाएन।
# ‘कूटनीतिक नोट’ सधैं गुपचुप
# कूटनीतिक नोट
# भारतबाट किन आउँदैन जवाफ?